पर्साको १ स्कुलमा सोच्नै नसकिने घटना, मसानघाटमा स्कुल, भुत भन्दै भागाभाग गर्छन विद्यार्थी !(भिडियो)
प्रकाशित मिति : June 2, 2019
पर्सा- जिल्लाको कालिकानाई गाउपालिका वडा न-४ मा रहेको राष्ट्रिय आधारभुत बिद्यालयमा अचम्मको समस्या देखियो । नसुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो कुरा साचो हो । जुन यी कलिला विद्यार्थी हरुले भोग्दै आईरहेका छन । स्कुलको छेउमा मसानघाट छ । जहाँ विद्यार्थीहरु भुत भन्दै भाग्ने गर्छन । त्यसैले त्यहा समय समयमा बिदा भैरहन्छ । यहाँ कुनै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुदैन । किनकी जब स्कुलमा पढ्न सबै विद्यार्थी आईपुग्छन, त्यतिबेला कुनै शव दाहसंस्कारका लागि मसानघाट आईपुग्छ ।
स्थापनाकालदेखी कै यस्तै समस्या झेल्दै आएको कुरा स्थानिय र बिद्यालयले प्रशासनले बताए । २ बिघाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस स्कुलको चारैतिर पर्खाल छ । जहाँ नजिकै मसानघाट छ । विद्यार्थी भन्छन : सार्है गन्हाउछ, मुटु धकधक हुन्छ । डर लाग्छ ।
* बालबालिकामा मनोरोग भएको कसरी थाहा पाउने? बाल मनोरोग भनेको के हो?
तपाईंका बालबालिकामा धेरै चकचक, झगडा गर्ने, स्कुल जान नमान्ने, धेरै मानिस भएको ठाउँमा जान नमान्ने, डराउने जस्ता समस्या छ? यस्ता समस्या देखिँदा छोराछोरीलाई गाली गर्ने र पिट्ने त गर्नुहुन्न? तर ख्याल गर्नुहोस् तपाईंको यस्तो ब्यवहारले बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिन सक्छ।
अभिभावकले बाल मनोविज्ञान बुझ्न नसकेर बालबालिकामाथि नकारात्मक ब्यबहार गर्दा बालबालिकामा गम्भीर बाल मनोरोग पनि देखिन सक्छ। बाल मनोरोग के हो? कसरी थाहा पाउने? र उपचार विधि के हो? भन्ने विषयमा वरिष्ठ बालमनोरोग विशेषज्ञ तथा कान्ति बाल अस्पतालका बाल मनोरोग विभागका प्रमुख डा. अरुण कुँवरसँग थाहाखबरका लागि सविना खनालले गरेको कुराकानी
बच्चाले उमेर अनुसार सोच्ने कुराहरु सोच्न नसक्नु, धेरै रिसाउने, उमेर अनुसार बालबालिकाको मानसिक र बौद्धिक विकास नहुनु र साधारण भन्दा भिन्न खालको बानी व्यवहार देखाउनु बाल मनोरोगको लक्षण हुन सक्छ। बालबालिकामा बालमनोरोगको लक्षण फरक फरक हुन्छ।
बालबालिकाले उमेर अनुसार आफ्नो क्षमताले काम गर्न नसक्नु, आवश्यक भन्दा धेरै खुसी हुनु,धेरै रिसाउनु, एउटै कुरालाई पटक फटक दोर्‍याइरहनु,आवश्यकता भन्दा धेरै खुसी हुनुलाई पनि बाल मनोरोगकाे लक्षणका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
* कसरी देखा पर्छ बालबालिकालाई बालमनोरोग?
बालबालिकालाई बाल मनोरोग धरै किसिमले हुन्छ। वंशाणुगत र वातावरणीय प्रभावको कारणले पनि बाल मनोरोग हुनसक्छ। हिजोआज देखिने बाल मनोरोग वंशाणुगत र वातावरणीय दुवैको कारणले हुने गरेको देखिएको छ। यदि अभिभावकमध्ये कसैलाई डिप्रेशन छ भने बालबालिकालाई बाल मनोरोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
घरमा अभिभावकलाई डिप्रेशन छ र स्कुलमा पनि बालबालिकालाई बालमैत्री खालको व्यवहार गरिदैन भने यस्तो बेलामा बालबालिकालाई बालमनोरोग हुने सम्भावना दोब्बर हुने गर्छ। अर्को कुरा अहिले धेरै बाबुआमा जागिर खान जाने र बालबालिकालाई समय दिन नसक्दा पनि यस्तो समस्या बढेको देखिन्छ।
बालबालिकालाई बालमनोरोग छ भनेर कसरी थाहा पाउने?
आफ्ना बालबालिकाले उमेर अनुसारको क्षमतामा काम गरेको छ कि छैन ख्याल गर्नुपर्छ। बालबालिका धेरै रिसाउने, चकचक गरिरहने,रातमा ननिदाउने धेरै बेरसम्म रोइरहने, धेरै रिसाउने, गृहकार्य गर्न नमान्ने, घरबाट बाहिर जान नमान्ने अर्थात सामान्य बालबालिका भन्दा फरक ब्यवहार देखाउछन् भने अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई बालमनोरोग छ कि भनेर विचार गर्नुपर्छ।
* बाल मनोरोग भएका बालबालिकालाई अभिभावकले कस्तो व्यवहार गर्नुगर्छ?
यदि तपाईंको बालबालिकालाई बाल मनोरोगको लक्षण देखापरेको छ भने साधारण व्यवहार गर्नुपर्छ। बाल मनोरोगको बिरामी भनेर भिन्न खालको व्यवहार गर्नुहुदैन। यस्ता बालबालिकालाई सामान्य सरह ब्यबहार गर्नुपर्छ। बच्चालाई समय अनुसार खान दिने, खेल्न दिने गर्नुपर्छ।
मुख्य कुरा आफ्नो बच्चालाई के कारणले यस्तो समस्या भएको हो पत्ता लगाउनतिर लाग्नुपर्छ। यदि बच्चाले यस्तो खालको व्यवहार लामो समयसम्म देखाइरहेको र त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ भने बाल मनोरोगको समस्या गम्भीर रुपमा देखा पर्नसक्छ। यस्तो अवस्थामा औषधी समेत खुवाउनुपर्ने हुनसक्छ।
* बालमनो रोगो उपचार विधि के हो?
यस्ता समस्या लिएर आउने बालबालिकाको सबैभन्दा पहिले उ हुर्किरहेको घरको वातावरण, स्कुलको वातावरणबारे अध्ययन गरी परामर्श दिने गरिन्छ। समस्या जटिल बन्दै गएमा औषधी समेत दिने गर्छौं।